မောင်ဖုန်းမြင့်: 1/1/09 - 2/1/09
အကြေးလှန် ချ ပစ်လိုက်တယ် ............။
ပြန်ရစ်ကြည့် နေစရာ မလိုဘူး
ဘဝကို Pause ခလုပ်သာနှိပ်လိုက်.........။
ဂမ္ဘီရ ဆန်ချင်နေသေးတယ် ......... ။
မီးခိုးအူပြီး အချက်ပြမယ် ......
" Please Help Me " !!!
" S . O . S "
" မိုးနတ်မင်းကြီး ကယ်ပါ " ......
ဘာသာစကား ၆ မျိုးနဲ့စာရေးပြီး
ပင်လယ်ထဲ မျှောချလိုက်တော့တယ် .........။
ကျွန်းမျော ပေါ်မှာ ........
ငါ ........ ....... .. ။
Posted by phone myint at 2:00 PM4comments: Links to this post
Posted by phone myint at 2:34 PM6comments: Links to this post